मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाइने, ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत प्रभाव ! | Seto Khabar
मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाइने, ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत प्रभाव !
पोखरा,जेठ ७। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले पृथ्वीचोकदेखि तालचोकसम्म राजमार्गको दायाँबायाँ मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउने भएको छ । महानगरपालिकाका ट्राफिक व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख मानबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अस्थायी घर, टहरा र ग्यारेजका सामान हटाउने निर्णय गरेको हो ।
मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएको भौतिक संरचना सात दिनभित्र हटाउन सूचना जारी गर्ने र नहटाएमा कारबाही गरिने ट्राफिक व्यवस्थापन समितिका फोकल पर्सन सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उहाँका अनुसार सडकको आसपासमा स्थायी संरचना, वर्कसप तथा जथाभावी निर्माणका सामग्री राख्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना भएको कारण हटाउन लागिएको हो । हटाउन तोकिएको सूचनालाई बेवास्ता गरेमा रु पाँच हजार जरिवाना गरिने निर्णय भएको छ ।
स्थायी संरचना र ग्यारेजले सडक छउेमा जथाभावी सामान राख्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या पारेकाले हटाउन लागिएको हो । बीच सडकमा रहेका १७ वटा पोललाई एक हप्ताभित्र सडक छेउमा सारिने बताउँदै उनले भने बीच सडकमा विद्युत्को पोल हुँदा दुर्घटना हुनुका साथै ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत प्रभाव परेको छ । रासस